Xaamid Karazay oo diiddan heshiiska USA - BBC News Somali
Xaamid Karazay oo diiddan heshiiska USA
26 Nofembar 2013
Image caption Xaamid Karazay ayaa diiddan inuu saxiixo heshiis dhanka amaanka ah oo Maraykanku culays ku saarayaan
Madaxweynaha Afghanistan Xaamid Karazay ayaa diiday inuu ka tanaasulo go'aankiisa ah in dib loo dhigo saxiixidda heshiis muhiim ah oo la xiriiro joogitaanka ciidammada Maraykanka wixii ka dambeeya 2014-ka.
Heshiiskan ayaa u oggolaan lahaa in kumanaan kun oo ciidammo Maraykan ah ay ku haraan dalkaas sanadka 2014-ka xilligaas oo la filayo in ciidammada NATO ay dalkaas baxaan.
Lataliyaha madaxweynaha Maraykanka ee arrimaha ammaanka Susan Raays oo kulan la yeelatay Karazai ayaa u sheegtay madaxwenaha in dib u dhigidda saxiixidda heshiiskan ay tahay "mid aan dhaqan geli karin".
Shirkan Karazay iyo Raays ayaa imanayo maalmo kaddib markii guddiga odayaasha ee dalkaas ee loo yeqaanno Loya Jirga ay ugu baaqeen madaxweynaha in heshiiska uu saxiixo.
Baarlamaanka dalka Afghnistan ayaa sidoo kale ansixiyay heshiiskaas.
Warbixin ka soo baxday aqalka Cad ee Maraykanka ayaa sheegtay in Karazai uu "soo jeediyay shuruud hor leh ka hor inta uusan saxiixin heshiiska"
Xafiiska madaxweynaha Afghanistan ayaa sheegay in Karazay uu shirka uu la yeeshay Rice u adeegsaday in Maraykanka uu ka hubsado in aysan weerarin guryaha dadka rayida ee reer Afghanistan.
Image caption Maraykanka ayaa doonaya in ciidammiida ay sii joogaan dalka Afghanistan
Waxaa kale oo uu Maraykanku ka codsaday Karazay inay qeyb ka noqdaan in dib loo soo nooleeyo wadaxaajoodka joogsaday ee lala lahaa ururka Taalibaan.
Maraykanka ayaa shardi ka dhigayo in ay qasab tahay in labo bilood gudahood lagu saxiixo heshiiska u oggolaanayo inay dalkaas sii joogaan wixi ka dambeeya 2014-ka.
Ciidammada NATO ayaa dalkaas ka baxayo sanadka 2014-ka, Maraykankana waxaa uu doonayaa in ciidammo gaarayo 15000 oo askeri ay ku sii haraan dalkaas xilligaas kaddib.
Mullah oo sheegay in aanay wax qasbi doonin
6 Agoosto 2013
Heshiiska Maraykanka iyo Afganistaan